लामखुट्टेको संख्या बढाउन उपमहानगरपालिका ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लामखुट्टेको संख्या बढाउन उपमहानगरपालिका !
२०७१ असार १७, मंगलवार ०३:०९ गते
अचेल घोषणा गर्ने लहर चलेको छ । केही समयअघि हामीले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेका थियौँ । अहिले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । घोषणैघोषणाको यो अभियानमा अर्को काम पनि थपिएको छ, त्यो हो– नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने चाहना । चितवनमा यो चाहनाले पनि अचेल बजार तताएको छ । मानौँ, यो बेला नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषणा नगरे हामी कहिल्यै अगाडि आउन नसक्ने गरेर पछाडि पर्नेवाला छौँ । त्यसैले, भएका गाविसलाई नगरपालिका र भएका नगरपालिकालाई उपमहानगर– पालिका घोषणा गराउने काममा हामी ज्यान फालेरै जुटेका छौँ ।
म भन्छु– जे भयो भयो, अब चितवनमा कुनै नगरपालिका नथपौँ । भएका जे–जति नयाँ तथा पुराना नगरपालिका छन्, तिनलाई नगरपालिकाकै हैसियतमा छाडौँ । यो उपमहानगरपालिका बनाउने लहड पनि त्यागौँ । हैन, हाम्रो मापदण्ड पुगेको छ भन्ने तर्क कसैले पक्कै गर्ने छ । ल त्यसो भए, के कसरी मापदण्ड पुगेको हो, त्यो बताइदिन त पर्ने हो नि हामीलाई । अर्को कुरो, जनसंख्या र अन्य केही प्रावधानहरुको न्यूनतम मापदण्ड लगभग पूरा भयो भनेर नगरपालिका उपमहानगरपालिका घोषणाका लागि हामी जुट्दै छौँ । हो, त्यस्ता न्यूनतम कुराहरु लगभग पूरा भए भनेर हामी घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ, गल्ती यहीँनेर भएको छ ।
नगरपालिका उपमहानगर– पालिका बन्नका लागि कागजमा तय भएका न्यूनतम मापदण्डलाई मात्रै आधार किन बनाउने ? न्यूनतम मापदण्ड पनि एउटा उच्चतम बिन्दुमा पुगेको भए पो, लौ अब तयारी थालौँ भन्नुहुन्थ्यो । तर, मापदण्डको बिन्दु छोयो भन्दैमा हामी दौडन, कुद्न थालेका छौँ, योचाहिँ ठीक भएन । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका घोषणाका आ–आफ्नै कागजी मापदण्डहरु छन् । ती कागजी मापदण्डभन्दा ठूलो कुरो हुन्छ, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाको सोच र शैली । लौ, भरतपुरलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने तहको हाम्रो मानसिकता, सोच र संस्कार परिष्कृत भएको छ त ? अहँ, पटक्कै भएको छैन । यो मापदण्डमा त हामी पूरापूर फेल छौँ ।
हाम्रो सहरमा पार्किङको हालत हेरौँ । पार्किङ व्यवस्थापनमा नगरपालिकाको ताल हेरौँ । तोकिएको ठाउँमा मात्रै पार्किङ गराउने बानी बसाउन ट्राफिक प्रहरीको जरिवानारुपी दण्ड त असफल हुँदै छ । हामी आफ्नै दुनियाँमा मस्त छौँ । नगरपालिकामा बस्छौँ, त्यसैले हामी सहरिया । नभए, हाम्रो चिन्तनमा सहरिया शैली र मानसिकता छैन । हामी फुटपाथमै बजार चलाउन खोज्छौँ । फुटपाथबाट मान्छे हटाउन थाल्छौँ र त्यसैलाई हामी काम गरेको भनेर प्रचार गर्न थाल्छौँ । फुटपाथमा पसल राख्न पाउनुपर्छ भनेर हामी गरिबहरुको पक्ष लिन पनि खोज्छौँ । यस्तो भोटमुखी मानसिकता छ हाम्रो ।
हामी भात खाएर हात चुठ्न सडकमा आउँछौँ । बचेको खान्की सडकमै मिल्काउँछौँ । त्यो सडक नगरपालिकाको हो, बढार्न नगरपालिका आउनुपर्छ– हाम्रो ठहर यही हो । केरा खान्छौँ, बोक्रा सडकमा मिल्काउँछौँ । हामी सहरियाले मिल्काएको बोक्रामा परेर कोही चिप्लन्छ । अनि, हामी मूच्र्छा परेर हास्छौँ र त्यसलाई भन्छौँ– कहाँको गाउँले, कस्तो गँवार, बाटोमा हेरेर पनि हिँड्न नजान्ने ! अनि आफैँले फालेको केराको बोक्रामा हामी परेर चिप्लिँदा हाम्रो मुखबाट अर्कै वाक्य निस्कन्छ । त्यो वाक्य यस्तो हुन्छ– ‘नगरपालिका कस्तो लापरबाह, फोहोरै नउठाउने !’ हाम्रो मानसिकता यही हो । नगरपालिका घोषणा हुनु भनेकै हामी बुझ्छौँ, अब फोहोर हामीले गर्ने र त्यसलाई उठाउन आउने नगरपालिका हो । मानौँ, मज्जाले फोहोर गरेर घरअगाडि मिल्काउन पाउनु नै नगरपालिका हुनुको फाइदा हो । यस्तो बानीमा अचेल हामीले केही सुधार गरेका छौँ । अचेल फोहोर मिल्काई हाल्दैनौँ, नगरपालिका लिन आउँछ भनेर सडकमा थुपार्न थालेका छौँ । परिवर्तन भएको यत्ति कुरा हो, अब यसैका आधारमा हामीले भरतपुरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने ?
नगरवासीले दिएको फोहोर मिल्काउने ठाउँ खोज्न नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे छ । यता फाले विरोध, उता फाले विरोध । अहिले त नारायणीकिनारमा लगेर पुर्न थालेका छौँ । नारायणी हो, जे गरे गर भनेर विरोध गर्न कोही आएका छैनन् । तर, नारायणीमा फोहोर फाल्नुजस्तो घातक केही होइन भन्ने न्यूनतम चेतना पनि नगरवासीलाई छैन, नगरपालिकाका अधिकारीलाई पनि छैन । मेरो घरआँगन होइन भनेर नदीकिनारमा मज्जाले फोहोर विसर्जन गर्न दिएका छौँ । विरोध आएन भनेर नगरपालिका प्रशासन नदीकिनारमै फोहोर फाल्न मस्त छ ।
ओहो, नदीजस्तो संवेदनशील स्थानमा फोहोरको डुंगुर विसर्जन नगरौँ, कोही भन्दैन । स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन भनेर नगरपालिकाले जाँगर चलाउँदैन । तर, भएको नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन भने हामी मरिहत्ते गर्दैछौँ । नगरपालिकामा बनेको ढलको उचित संरक्षण छैन र आवश्यक ढल निर्माणमा चासो छैन । तर, उपमहानगरपालिका बनाउनचाहिँ कस्तो हतार ! यो हतारको रहस्य बुझिनसक्नु छ । उपमहानगरपालिका बनेर हुने फाइदा कसलाई हो, त्यो पनि बुझिनसक्नु नै छ ।
असार १३ गते शुक्रबार चितवन जिल्ला विकास समितिको सभाहलमा एउटा भव्य कार्यक्रम
भयो । सहभागीहरुको संख्याका हिसाबले मात्रै होइन, विषयवस्तुका दृष्टिले पनि कार्यक्रम मह¤वपूर्ण
थियो । जिल्लालाई उन्नत बनाउन आउँदो पाँच वर्षसम्म चितवनमा के–कस्ता काम र योजनाहरु गर्ने भनेर जिविसले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो त्यो । पञ्च वर्षीय आवधिक योजना निर्माणका लागि राखिएको त्यस्तो मह¤वपूर्ण कार्यक्रममा ठूला र मुख्य भनिने राजनीतिक दलका कोही पनि मुख्य व्यक्ति देखा परेनन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता दलका दोस्रो तहका नेता मात्रै उपस्थित थिए ।
सोही कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारीले जानकारी पस्किए, चितवनको चन्डीभञ्ज्याङ गाविसलाई अझै सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन । जिल्लाभित्र गाविसको अवस्था यस्तो छ, तर हामी समुचित विकासका लागि हुने बहसलाई बेवास्ता गर्दै छौँ । यस्तो मह¤वपूर्ण कार्यक्रमलाई छाडेर नेताजीहरु कता लागेछन् त ? बुझ्दै जाँदा पत्तो लाग्यो, मुख्य नेता त काठमाडौँ लागेछन् । किन लागेछन् भन्दा हैन यो पटक नै भरतपुरलाई जसरी हुन्छ उपमहानगरपालिका घोषणा गर्नुपर्ने भयो भन्ने माग बोकेर त्यता गएछन् ।
मानौँ, यो पटक भरतपुरलाई उपमहानगरपालिका नबनाउने हो भने यो असार–साउनभर पानी पर्दैन । यो हदसम्मको समस्या आउँछ भनेर काठमाडौँ गएजस्तो गरे नेताज्यूहरुले । नेताज्यूहरु, उपमहानगरपालिकाका बासिन्दालाई कर बढी तिर्नुप¥यो भनेर चिन्ता र कचकच गर्न नपाउने बनाउन सक्नुहुन्छ ? बिजुली नसके पनि पर्याप्त पानी आउँछ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ? लौ, चिल्ला सडक त देख्न नपाइएला रे, घरदेखि बजार र बजारदेखि घर ओहोरदोहोर गर्दा धूलो छेक्न माक्र्स नलगाई हिँड्न पाइन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ ? यीमध्ये कुनै एक पूरा गर्छु भनेर लेखेर दिन नसक्ने हो भने कसरी मान्ने, उपमहानगरपालिका बन्ने मापदण्ड पूरा भयो भनेर ?
नेताज्यूहरु भरतपुर उपमहानगरपालिका नबनेर कुनै आकाश खस्दैन । यस्ता कुराका लागि काठमाडौँ किन धाएको ? स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन भनेर बरू मरिमेटेर लाग्नुस् । त्यो भएमा नारायणी मातालाई फोहोरको भारी बोकाएर गरेको पापबाट मुक्त भइने छ । नारायणी माताको आशीर्वाद लाग्ने छ । लहडमा उपमहानगर– पालिका नगरपालिका बनाउँदै जाने हो भने मान्छे बढाउने र मान्छेभन्दा धेरै भुसुना तथा लामखुट्टेको संख्या बढाउने मेसो मात्रै निकाल्ने हो ।
मान्छे–मान्छेको भीडमा भुसुना र लामखुट्टे घुसेमा मलेरिया, डेंगु, कालाज्वारजस्ता रोगको महामारी बढ्छ । खानेपानीको उचित प्रबन्ध नभए टाइफाइड र जन्डिस फैलन्छ । एक पटक जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय गएर बुझ्नुस त, यस्ता रोगले नगर क्षेत्रमा नै बढी सताएको छ । त्यसैले, बिनापूर्वाधार र बिनासंस्कार नगरपालिकाको ठाउँमा उपमहानगर– पालिका स्थापना गरेर रोगीहरुको संख्या बढाउनेबाहेक अन्य उपलब्धि छैन ।